Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay Musiibadii ka dhalatay Fatahaada Webiga Shabeelle. – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Dowlada Goboleedka Puntland Mudane, Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya Magaca Goleyaasha kala duwan ee Dowlad Goboleedka Puntland iyo kan Shacabka Puntland wuxuu tacsi u dirayaa ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday waxyeelada ka dhalatay Fatahaadda Webiga Shabeelle, wuxuuna illaahay uga baryay inuu Jannatul Fardowsa geeyo, eheladoodiina Samir iyo iimaan ka siiyo.
Puntland iyo Shacabkeedaba waxay la qeybsanaysaa dhibka iyo xanuunka ay wajahayaan walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeelada lixaadka leh kasoo gaartay fatahaadda webiyada Shabeelle iyo Jubba, waxaana la garab taaganahay taageero iyo gurmad ay waajib tahay inaan bixinno.
Ugu danbeyntii Madaxweynaha Dowladda Goboleedka Puntland Mudane, Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu ugu baaqay cidkastoo gacan ka geysan karta in la sameeyo waxkasta oo suuragal ah si dadkaasi ay u helaan caawimaad bani’aadanimo oo deg deg ah. Waxaa sidoo kale lama huraan ah in laga tabaabusheysto sidii looga gaashaaman lahaa fatahaadaha soo noq-noqda oo geysta khasaaro nafeed iyo mid dhaqaale oo baaxad leh.
Shirka Madasha Arimaha Bini’aadanimo oo ka furmay Muqdisho.